MO FARAH oo mar kale qaaday billada 5ta kun ee mitir |
MO FARAH oo mar kale qaaday billada 5ta kun ee mitir
Orodyahanka Soomaali Ingiriiska ah ee Maxamed Faarax (MO FARAH) ayaa mar kale asagu qaaday orodka 5ta kun ee mitir.
Asagoo ka qeyb qaadanaya ciyaaraha OLOMBIKADA ee haatan kasocda Rio ee dalkaasi Brazil balse la filaayo in maanta lasoo gabagabeeyo ayuu difaacay rikoorkiisa isla markaana uu qaaday billada dahabiga ah ee orodka 5ta kun. Halkaa ayuu mar kale wacdaro ka muujiyay.
Balse booska 4aad markii uu kasoo galay orodkii shalay ee 5ta kun asagoo qaatay billad nooca bronze ayaa dareenkiisa oo farax uu ku dheehnaa uu muujiyay.
Guud ahaan ayadoo ciyaaraha maanta oo Axad ah lagu wado in lasoo xiro ayaa waxaa dalal badan oo Afrikaan ah ay ka heleen billado dalalkaa oo kuwa ugu cadcad ay yihiin Itoobiya iyo Kenya oo ah dal soo saara orodyahano badan oo wanaagsan.